Manazava ny fomba fandroahana tranonkala iray miaraka amin'ny Supéry tsara ny Semalt Expert
Maro be ny angon-drakitra HTML. Ho an'ny milina mpamokatra solosaina, tranonkala iray dia singa maromaro, sary famantarana, ary toerana malalaka. Ny zavatra tena tadiavinay mba hahatongavana ao amin'ny tranonkala iray dia afa-po amin'ny fomba izay mora vakiana aminay. Ny solosaina dia mamaritra ireo singa ireo ho toy ny HTML. Ny singa izay manavaka ny code tsy miala amin'ny angona azonay dia ny rindrambaiko, amin'ity tranga ity, ny navigateur. Ny tranonkala hafa toy ny fananganana dia mety hampiasa io hevitra io hanalàna ny votoatin'ny vohikala iray ary hamonjy azy io amin'ny fampiasana amin'ny manaraka.
Amin'ny teny tsotra, raha manokatra tahirin-kevitra HTML na loharanom-pejy ho an'ny pejy manokana ianao, dia azo atao ny mamerina ny votoatiny ao amin'io tranonkala manokana io. Ity fampahalalana ity dia eo amin'ny tontolon'ny fisaka miaraka amin'ny code maro. Ny dingana manontolo dia midika fa ny fijerena ny votoatiny amin'ny fomba tsy voaaro. Na izany aza, azo atao ny mametraka izany fampahalalana amin'ny fomba amam-pitsipika izany ary mamoaka ny ampahany ilaina amin'ny fehezan-dalàna rehetra.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy manatanteraka ny asany ny mpangalatra mba hanatratrarana karazana HTML. Matetika dia misy ny tombontsoa farany izay tadiavin'ny olona rehetra. Ohatra, ireo olona izay manao hetsika ara-barotra amin'ny aterineto dia mety mila mampiditra string tokana toy ny command-f mba hahazoana vaovao avy amin'ny tranonkala iray. Raha te hamita io asa io amin'ny pejy maromaro ianao dia mety mila fanampiana fa tsy ny fahaiza-manaon'olombelona ihany. Ireo mpandrafitra tranokala dia ireo botsika izay afaka manaparitaka tranokala miaraka amin'ny pejy iray tapitrisa mandritra ny ora maromaro. Ny dingana manontolo dia mitaky fomba fijery tsotra. Amin'ny fiteny sasany mampiasa programa tahaka an'i Python, ny mpisera dia afaka mametraka ny mpikirakira sasany afaka manangona antonta-tranonkalan'ny tranonkala iray ary mametraka azy any amin'ny toerana manokana.
Ny fako dia mety ho dingana mety hampidi-doza ho an'ny tranonkala sasany. Maro ireo ahiahy manodina ny maha-ara-dalàna ny fangalarana. Voalohany, ny olona sasany dia mihevitra ny tsiambaratelony manokana sy tsiambaratelo. Ity tranga ity dia midika fa ny olan'ny zon'ny mpamorona, ary koa ny famakiana votoaty miavaka, dia mety hitranga amin'ny fisakafoanana. Amin'ny tranga sasany dia alefa ny tranonkala iray manontolo ho an'ny fampiasana ivelan'ny aterineto. Ohatra, tao anatin'ny lasa vao haingana, misy ny tranga Craigslist ho an'ny tranonkala antsoina hoe 3Taps. Ity tranonkala ity dia nanala ny votoatin'ny vohikala ary namerina namoaka lisitry ny trano ho an'ny sokajy voasokitra. Nifanaraka tamin'ny 3Taps izy ireo nametraka $ 1,000,000 ho an'ny tranokalany teo aloha.
BS dia fitaovana iray (Language Python) toy ny modules na fonosana. Azonao atao ny mampiasa Supérieure tsara mba hanangona tranonkala iray avy amin'ny pejin'ny pejy ao amin'ny tranonkala. Azo atao ny manadio tranokala iray ary mametraka ny angon-drakitra amin'ny endriny iray izay mifanaraka amin'ny vokatrao. Azonao atao ny manadihady URL iray ary mametraka lamina manokana miaraka amin'ny format manan-danja. Amin'ny BS, afaka mandefa amin'ny endrika isan-karazany ianao, toy ny XML. Mba hanombohana dia mila manamboatra version BS ianao ary manomboka amin'ny fototra Python vitsivitsy. Tena ilaina ny fahalalana fahalalana Source .